Sawirro il furan oo tayo sare leh oo leh Liiska | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Sawirro, dhowr
Creative Commons ayaa bilaabay mashruuc cusub iyada oo ujeedadu tahay in helitaanka bangiyada sawirku aanu inaga dhigaynin gacan iyo lug waxaanna ka heli karnaa sawirro tayo sare leh Liiska.
Haa, Liistadu waa mashruuca cusub ee loo yaqaan 'Creative Commons' oo loo helo barnaamij Android ah. App ay soo saartay Creative Commons laftiisa taas waxay u saamaxdaa isticmaaleyaasha inay is weydiistaan ​​oo ay isku istcimaalaan sawirro isku mid ah liisanka Creative Commons Attribution (CC BY). Barnaamijkani wuxuu ka soo baxayaa baahida loo qabo dhammaan noocyada NGO-yada, warbaahinta, hay'adaha dhaqanka ama dadka si ay u helaan sawirro tayo sare leh oo gebi ahaanba bilaash ah.
Khadadkaan waxaan horey u wadaagnay kuwa ugu fiican dhowr jeer tayo sare leh bogagga sawir-furan ee furan. In kasta oo runta, haddii aan raadino shay gaar ah, raadintu waxay noqon kartaa mid caajis badan markaa mashruuc la mid ah kii ay bilaabeen 'Creative Commons with the List' wuxuu noqon karaa kan ugu habboon munaasabadda.
Dhamaan sawirada kujira liistada waxay kujiraan shati bilaash ah, taas oo macnaheedu yahay in qof kastaa isticmaali karo. Iyo si sax ah maxaa yeelay waa liisanka Hal Abuurista Creative Commons, ee loogu talagalay isticmaalka ganacsiga, ku xirnaanshaha qoraaga asalka ah ayaa loo baahan yahay. Marka haddii sabab kasta ha noqotee aad sawir u qaadatid oo hadhow loo adeegsado ujeedkan, magacaaga ayaa ka muuqan doona dhibcaha.
Barnaamijka ayaa hadda loo heli karaa Android qaab beta ah oo waxaad kala soo bixi kartaa websaydhka mashruuca. App kuu ogolaanaya inaad xulato qeybaha kala duwan ee aad sawiro ka qaadi doonto si aad u buuxiso amarada isticmaalayaasha kale.
Una qalab iskaashi kaamil ah loogu talagalay isticmaaleyaasha raadinaya sawirro tayo sare leh iyo sidoo kale kuwa jecel inay iyagu qaataan oo ay markaa u geliyaan Liiska.
Waad awoodaa marin u soo dejiso ka xidhiidhkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sawirro » Ku hel sawirro bilaash ah oo tayo sare leh Liiska, barnaamijka 'Commons Commons'
Qalab aad u xiiso badan dhammaanteen oo u heellan naqshadeynta websaydhka iyo suuqgeynta internetka. Helitaanka tayada Sawirada Hal-abuurka ah ee loo yaqaan 'Creative Commons' had iyo jeer ma sahlana, sidaad sheegto, markaa barnaamijkani wuxuu noqon karaa mid aad waxtar u leh! Waad ku mahadsantahay wadaagida, waxaan ku dari doonnaa qalabkeena shaqada.
Ku jawaab Zerozero
Waad soo dhawaynaysaa Zerozero! Taasi waa waxa aan u nahay: =)